Ajanony ny faniriana hisy zavatra hitranga ary mandehana. - Anony - Quote Pedia
Biby tena maniry fatratra an-tany ny olombelona, sady kamo koa no very saina. Maniry ny fahombiazana amin'ny fiainantsika rehetra isika, maniry daholo izahay fa afaka nanakana zavatra ratsy tsy hitranga amin'ny fiainantsika, saingy vitsy dia vitsy ny olona izay manao ny dingana hahatanteraka ny faniriany.
Maniry izahay mba ho dokotera mahay na injeniera mahomby, mpihira mampientam-po, cricketer mahafinaritra, sns. Maniry izahay fa hanao dinidinika amin'io orinasa lehibe io; manantena izahay fa milalao an'io mpitendry mozika io; Manantena izahay fa afaka miara-milalao amin'ny mpanao fanatanjahantena manokana indray mandeha eo amin'ny fiainantsika. Manana faniriana be daholo isika rehetra.
Na izany aza, tsy azontsika ny zavatra kely iray. Tsy takatsika fa fa tsy hiandry fotsiny fotsiny ary maniry ny hisian'izany isika, raha miezaka hanao izay hahatontosa azy isika dia mety hanao dingana iray akaiky kokoa ny nofinofintsika sy ny faniriantsika.
Tadidio foana fa raha manana nofy ianao, tanjona, dia manana hery hanatanterahana izany ianao. Niseho taminao izany satria efa vonona sy mahay tsara ianao ary manomboka eo an-dàlana mba hahatontosa ilay nofy. Ny ambiny, ianao irery no tokony hanao izany.
Mila manenjika azy ianao. Mila miady foana ianao. Ity tontolo ity dia hanohy hamoaka olana aminao hatrany. Na izany aza, mbola mila mitantana mihazona azy ianao. Hiatrika fotoan-tsarotra ianao; ny nofinofinao dia ho mbo tsy hifandrovitra; saingy mila manome ny fiarovana ho azy ireo ianao. Mila mitazona azy ireo hatrany.
Satria, fantaro hatrany ity zavatra iray ity raha mbola mitazona ny tanjonao dia hanampy anao hanatsara ny fahaizanao hahatratra azy izany. Noho izany, isaky ny maniry zavatra ianao dia mahaiza dingana vitsivitsy mba hahatratrarana io toerana io. Tsy misy zavatra maimaim-poana; mila manao azy ianao.
Atao amin'ny làlana izao
Eritreritra momba ny aingam-panahy
Quotes Work Work
Ajanony ny Quotes
Ny eritreritra ny andro
Ny fiainana dia ny handrosoana, ny fanekena ny fiovana ary ny fiandrasana izay mahatonga anao ho matanjaka sy feno kokoa. - Anonyme
Ny fiainana dia ny handrosoana, ny fanekena fiovana ary ny fiandrasana izay mahatonga anao ho matanjaka sy feno kokoa.…
Tsy mihena ny sandanao raha miorina amin'ny tsy fahafahan'ny olona mahita ny lanjany. - Anonyme
Marihina fa tsy misy afaka hatsaraina noho ny fomba fanao mahazatra…
Raha mamitaka olona ianao, dia aza mieritreritra hoe adala ilay olona. Fantaro fa natoky anao mihoatra noho izay mendrika anao ilay olona. - Anonyme
Raha mamitaka olona ianao, dia aza mieritreritra hoe adala ilay olona. Fantaro fa natoky ilay olona ...
Aza miorina amin'ny toro-hevitra amin'ireo izay tsy tokony hiatrika ny valiny. - Anonyme
Isaky ny mikasa ny hanapa-kevitra ianao, dia ho hitanao fa misy olona marobe…